ကုလသမဂ္ဂ အ​ထွေ​ထွေညီလာခံကြီးက​နေ ဦး​ကျော်မိုးထွန်းကို “နိုင်ငံကိုယ်စားပြုခွင့်” ​ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတု – Think Before You TRUST
Home>>သတင်းအတုစစ်ဆေးခြင်း>>နိုင်ငံတကာ>>ကုလသမဂ္ဂ အ​ထွေ​ထွေညီလာခံကြီးက​နေ ဦး​ကျော်မိုးထွန်းကို “နိုင်ငံကိုယ်စားပြုခွင့်” ​ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတု
တွေးပြီးမှယုံAugust 14, 2021
ကုလသမဂ္ဂ အ​ထွေ​ထွေညီလာခံကြီးက​နေ ဦး​ကျော်မိုးထွန်းကို “နိုင်ငံကိုယ်စားပြုခွင့်” ​ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတု
ဒီသတင်းတုကို Thar Gyi ဆိုတဲ့ Facebook Account တစ်ခုက​နေ ဒီ​နေ့ ​ည​နေ့ခင်းလောက်မှ ဖြန့်​ဝေခဲ့ပြီး အခုချိန်ထိ​အောင် ပြန်လည်မျှ​ဝေသူ​ပေါင်း ၄၇၀ ရှိ​နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ စတင်ဖြန့်ဝေခဲ့သူက မူရင်းပိုစ့်က ဖြုတ်ချခဲ့ပေမယ့် ထပ်ဆင့်ကူးယူမျှဝေသူတွေ ရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ​တွေးပြီးမှယုံ ရဲ့ အချက်အလက် စစ်​ဆေးသူ​တွေက​နေ အချက်အလက် စစ်​ဆေးခဲ့ရာမှာ​တော့ သတင်းအမှားသာ ဖြစ်​နေတာကို ​တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမျိုးသားညီညွတ်​ရေးအစိုးရ (NUG) နဲ့အပြိုင် အာဏာသိမ်းစစ်​ကောင်စီ က​နေ တင်သွင်းမဲ့ ကုလမှာ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ် ​ရွေးချယ်တာကို စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်​နေ့မှသာ ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဒါဟာသတင်းတု တစ်ခုသာဖြစ်​နေပါတယ်။ ဒီ​ “နိုင်ငံကိုယ်စားပြုခွင့်” အ​ကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ လုပ်ငန်းစဥ်အဆင့်ဆင့်ကို General Strike Coordination Body – GSCB Page က​နေ မျှ​ဝေ​ပေးထားတဲ့ ပိုစ့်မှာ ကြည့်ရှု​လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Link
ဒီပိုစ့်မှာ ဆိုရင် UN အထွေထွေ ညီလာခံ အကြောင်း၊ ဖြစ်လာနိုင်ခြေတွေ အပြင် တိုက်ပွဲကနေ ပြည်သူတွေ ဘာကိုမျှော်လင့်လို့ရသလဲ? ပြည်သူတွေ ဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲ? ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ ရေးသားထားပါတယ်။ ဒီလို ​အများပြည်သူကို ​မျှော်လင့်ချက် အမှား​တွေ ​ပေးတဲ့ သတင်းတု​တွေဟာ ခဏ ခဏ ထွက်​ပေါ်​နေပါတယ်။ ဒီအ​ကြောင်း​တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လွတ်လပ်တဲ့ တရားဝင်သတင်းမီဒီယာ​တွေရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်​တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်​ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်စစ်​ဆေးဖို့ရာ အခက်အခဲရှိခဲ့ရင်လည်း ​တွေးပြီးမှယုံ ရဲ့ Chat Box မှာ ​လာ​ရောက်​မေးမြန်း​နိုင်ပါတယ်။
5 Million Challenge ပြည့်သွားပြီဖြစ်လို့ အလှူ​​​ငွေကောက်ခံ​နေတာလည်း ပိတ်သွားပြီဖြစ်​ကြောင်း သတင်းတုလွှင့်​နေ
COVID-19 တိုက်ပွဲမှာ အီကွေဒေါ အရှုံးပေးလိုက်ရပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းတု